Ntụziaka achicha karọt: Esi mee ya? Lelee ntuziaka kachasị mma!
Alimentos	 27 December 2018
Maka ndị na-amasị ihe ụtọ, usoro nri achịcha karọt bụ ahụmịhe mmụta pụrụ iche. Nri nke gafere ọtụtụ afọ, ọgbọ, oge na ọbụna taa na-adịgide ike, maka ịbụ ihe na-atọ ụtọ ma dịkwa mfe ịkwadebe.
N'isiokwu na-esonụ ị ga-amụta nzọụkwụ site na otu esi esi mee ka ofe achicha karọt. Na mgbakwunye na ndụmọdụ ndị ọzọ iji mee ka achịcha gị mee ka ọ dịkwuo ụtọ. Lelee!
Kedu ihe bụ achịcha karọt kacha mma?
Achicha karọt nwere ike inwe otu ma ọ bụ abụọ nzọụkwụ, ọ dabere na ihe ị chọrọ. Otu bụ ntụ ọka mgwakota agwa na nke ọzọ, nhọrọ, bụ ma ịchọrọ ịgbakwunye ihe na-atọ ụtọ chocolate icing.
Na njem a, ị ga-amụta otu esi eme naanị mgwakota agwa na, n'oge ederede ọzọ, a ga-akụzikwa mkpuchi.
. 2 obere karọt
. 1 na ½ iko shuga tii
. 3 àkwá
. Iko mmanụ tii
. Iko tii ọka
1 na ½ iko ntụ ọka wit
. 2 teaspoons nke ntụ ịme achịcha
Nke mbụ ị ga-emerịrị carrots ahụ. Emesịa, tinye ha na blender yana mmanụ yana akwa. Kpoo ya ruo mgbe ọ ga-etolite tapawa. Tinye ngwakọta a na nnukwu efere ma ọ bụ ite ma gwakọta na shuga, ọka ọka na ntụ ọka niile. Mgbe ihe niile na-homogenized, fanye yist ma mechaa agwakọta.
Kpochapu oven wee tinye mgwakota agwa a na mpempe mmiri na akpọọ nkụ ruo nkeji iri anọ na oven. Ọ nwere ike iwe ihe ma ọ bụ obere, dabere na ike na ogo nke oven gị.
Njikere. Mgbe ahụ wepụ ya na pan ahụ, tinye ya na igbe ọzọ ị họọrọ, chere ka ọ dị jụụ ma ọ bụ rie nri ọkụ, ọ bụrụ na ịchọrọ.
Kedu otu esi eme nri dị mfe?
Nzọụkwụ nke a kọwara n'elu bụ nke kachasị mfe ị ga-ahụ iji mee achịcha karọt dị ezigbo ụtọ. Naanị soro ndụmọdụ ndị a kọwara n'elu na ihe niile ga-adị mma. Dị mfe, na-enweghị ihe nzuzo ọ bụla. Naanị ihe dị mkpa bụ ị isa ntị na oven ka ọ ghara ịcha ma ọ bụ nweta raw.
Iji nwetakwuo melite karọt achicha achicha, ihe kachasị mma bụ ime ka ichota chọkọletị ahụ dị ụtọ.
Kedu ihe bụ isi nri maka achicha karọt chọkọletị?
Ekwesịrị ịme icing ahụ mgbe achicha ahụ na-eme achịcha, yabụ na ị gaghị egbusi oge na ihe niile dị njikere, karịa ma ọ bụ obere, n'otu oge ahụ. Hụ ihe ndị mejupụtara na nkwadebe n'okpuru!
. 4 tablespoons nke mmiri ara ehi
. 2 tablespoons nke ntụ ntụ chocolate
. 2 teaspoons nke bọta
. 2 tablespoons shuga
Gwakọta mmiri ara ehi, shuga, bọta na chocolate n'ime ite mmiri ara ehi. Tinye okpomọkụ ahụ na ala ma kpoo ngwakọta a nwayọ ruo mgbe ọ ga-adị ezigbo mma ma buru ibu. Gbanyụọ ọkụ ahụ, mee oghere ole na ole na achicha ahụ ma wụsa efere si n'elu. Njikere! Achicha gi achicha zuru oke ka o rie.
Olee otú iji kwadebe mfe?
Ntụziaka a dị mfe ma dị mfe site na ihe oriri iri abụọ nke achicha wee nwee ike mekwuo ya na sprinkles ma ọ bụ ọbụna aki oyibo grated, ọ bụrụ na ịchọrọ. Mfe dị mfe ịme, yana ihe ole na ole, dị ọnụ ala ma nwee ike ree ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ego ọzọ.
Kedu ihe dị iche na ntụ ọka achicha nke America karọt?
Ihe dị iche n'etiti achicha America na nke Brazil bụ na a na-eji ukpa ahụ mee icing ahụ, ike na vanilla. Nke na-enye ya udi ma detuo ya iche site na ichok chocolate.
Iji mee ihe a, ị ga-agwakọta bọta, cheese cheese, sugar na vanilla na ngaji ma ọ bụ igwekota eletrik. Mgbe ahụ, tụfuo ya na achicha ahụ ma tinye mkpụrụ.
A na-eji pawuda eme ihe na nkwadebe nke mgwakota agwa yana ntụ ọka na obere obere vanilla. Usoro mmepụta ihe bụ otu, gwakọta ihe niile wee sie.
Kedu ka esi eme ya?
Achicha karọt aerated, nke nwere oghere ole na ole ma yiekwu ikuku oxygen, bụ na ọ na-ewe ọkara iko iko mmiri ara ehi mgbe ị na-agwakọta ihe ndị ahụ iji mee mgwakota agwa. Naanị tinye mmiri ara ehi na ọ ga-adị ka nke a.
Kedu ihe nhazi maka achịcha karọt na nnukwu efere nri?
Ntụziaka a kụziri na ederede a na-amịpụta ugboro iri abụọ, ya bụ, ka a ga-eme ya na nnukwu efere. Y’oburu n’acho ime uzo buru ibu karie ka iwetulata ihe obula.
Nọrọ, a ga-enwe achicha
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta ihe kacha mma Ezi ntụziaka na ka na-akpata ụma ego na ya, mkpa ka ị mara Fica, a ga-enwe achicha. Ọ bụ akwụkwọ ntanetị nwere nnukwu ịhụnanya na ịhụnanya site n'aka nne nne a hụrụ n'anya na Brazil, Palmirinha.
Na akwụkwọ ntanetị ị ga-enwe ụzọ iri nri pụrụ iche 10 nke Palmirinha họpụtara. Na nhazi ọ bụla, enwere usoro site na nkwụsị nke obere nzuzo ọ bụla ejiri ya na nke ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịme achịcha kachasị mma ma nweta ezigbo uru.
Ee! Fica, ga-enwe achicha zuru oke ma juputa na ntuziaka ndi ahoputara. Na mgbakwunye na ịmụ akwụkwọ nri mmiri n'ọnụ, ị nwere ike irite uru na ya ma bụrụ aka. Site na usoro nri kachasị amasị Palmirinha, ị ga-amụta etu esi edozi achịcha ahụ n'ụzọ dị mfe ma baa uru.
Pịa bọtịnụ dị n'okpuru ma zụta Fica gị ugbu a, a ga-enwe achicha!
Ọ bụrụ na ederede ederede achịcha achicha achọrọ gị, soro ndị enyi na ndị ezinụlọ gị kerịta ya!
Tummy fụrụ akpụ: Chọpụta Ihe Ọ Ga - adị Ka Idozi Nsogbu Ahụ!
Ihe niile gbasara ọgwụ mgbochi ime: Jụọ obi abụọ gị niile!
Uru nke ụtọ nduku ke hypertrophy
Healing site Teas: Ahụike nke sitere n'okike!